नराम्रो सपना वा अैठन भएर हैरान हुनुहुन्छ? शास्त्र भन्छ सिरानीमुनि राख्नुहोस यी ५ चिज - pnpkhabar.com
You are at:Home»धर्म/दर्शन»नराम्रो सपना वा अैठन भएर हैरान हुनुहुन्छ? शास्त्र भन्छ सिरानीमुनि राख्नुहोस यी ५ चिज
By मनिषा थापा on ८ जेष्ठ २०७५, मंगलवार ०७:०७ धर्म/दर्शन
२, पानीले भरेको तामाको भाडा : निद्रामा डर लाग्ने सपना देखेमा पानीले भरिएको भाडा वा अम्खारा ओछ्यानको नजिक राख्नुहोस्। बिहान उक्त पानीलाई बिरुवामा हलिदिनुहोस।
३, चक्कु : वास्तुशास्त्रका अनुसार दैनिक डरलाग्दो सपना देखेर हैरान हुनुहुन्छ भने सिरानीमुनि चक्कु राख्नुहोस।
८, जुत्ता- चप्पल : सुत्ने कोठा वा ओछ्यानको वरिपरि र खाटमुनि जुत्ता चप्पल राख्दा पनि राती नराम्रो सपना आउने गर्छ। ९, ओढ्ने : ओढ्ने कहिले पनि यस्तो प्रयोग गर्नुहुदैन। जसको रङ गाढा, धेरै प्रिन्ट, हिंसक जनावरको तस्बिर भएको हुनुहुदैन